नेपालमा रि-इन्स्योरेन्स ब्यबसायको अवस्था कस्तो छ ? – Insurance Khabar
नेपालमा रि-इन्स्योरेन्स ब्यबसायको अवस्था कस्तो छ ?
प्रकाशित मिति : १३ फाल्गुन २०७४, आईतवार ०६:१४
काठमाडौँ । इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको जोखिमलाई अर्को कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया नै पुनर्बिमा/रि-इन्स्योरेन्स हो । इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफूले लिएको जोखिम सबै आफैँले बहन गर्न सक्दैन वा आफैले बहन गर्दा धरै जोखिम हुने हुदा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू आफ्नो जोखिमलाई कम गर्न अर्को कम्पनीमा जोखिम हस्तान्तरण गर्ने गर्दछन् । महाविपत्तिजस्ता समस्या परेको समयमा कम्पनी एक्लैले सबै भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले पनि आफ्नो दायित्व/जोखिम वितरण गरेको हुन्छ । यसरी दायित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया पुनर्बिमा/रि-इन्स्योरेन्स हो ।
नेपालमा नेपाल रि- इन्स्योरेन्स कम्पनीले पुनर्बिमाको काम गर्दै आएको छ, तथापी नेपाल रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीले हाल को कुल पुनर्बिमा ब्यबसायको करिब ५% मात्र पुनर्बिमा ब्यबसाय गरेको छ अधिकांश नेपाली बिमा कम्पनीहरूले विदेशका विभिन्न पुनर्बिमा कम्पनी या ब्रोकरमार्फत पुनर्बिमा/इन्स्योरेन्स गर्दै आएका छन् । यसरी पुनर्बिमाबापत नेपालबाट बर्सेनि करिब २ अर्र्ब रुपैयाँ बाहिरिने भएपछि नेपालमै पुनर्बिमा कम्पनीको स्थापना गरिएको हो । पुनर्बिमाबापत बाहिरिने रकम नेपालमै रोक्न ०७१ कात्तिकमा नेपाल सरकार, निर्जीवन र जीवन बिमा कम्पनीको संयुक्त लगानीमा नेपाल रि- इन्स्योरेन्स कम्पनीको स्थापना गरिएको हो ।
स्थापना गर्दा स्वदेशी बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो पुनर्बिमाबापतको हिस्सामध्ये ५ प्रतिशत स्वदेशकै पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । पुनर्बिमा व्यवसायसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ मा पुनर्बिमकले नेपालभित्र जारी हुने बिमालेखअन्तर्गत उत्पन्न हुने दायित्वको अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष हिस्सा लिई व्यवसाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, केही कम्पनीहरूले १५ प्रतिशतसम्म पुनर्बिमा गरेका छन् ।
सरकारी लगानीमा रहेको कम्पनीमा निश्चित प्रतिशत अनिवार्य पुनर्बिमा गर्ने अभ्यास अन्य मुलकहरूमा पनि छ । नेपालमा पुनर्बिमा ब्यबसायको विस्तारको लागि बिमा समिति ले रि-इन्स्योरेन्स ब्रोकर को अनुमति दिने तयारी गर्दै छ ।